Palmdale, CA • Body Mass sy NuRu Massage
Jereo ny tolotra ataonay any bodyrub any Palmdale, CA.
Palmdale dia tanàna iray ao amin'ny faritry ny distrikan'i Los Angeles, any Etazonia. Ny tanàna dia ao amin'ny faritry Antelope Valley any atsimon'i California. Ny San Gabriel Mountains dia manasaraka an'i Palmdale sy ny tanànan'i Los Angeles mankany atsimo. Hizaha ny tolotray ao bodyrub any Palmdale, CA.